20-Kii Kalidii-Taliye Ee Ugu Awood Badnaa Qaaradda Afrika – Maanta Iyo Yaya Jammeh & Charles Taylor – Q:7aad – Tusmoonline.com
20-Kii Kalidii-Taliye Ee Ugu Awood Badnaa Qaaradda Afrika – Maanta Iyo Yaya Jammeh & Charles Taylor – Q:7aad
Dhacdooyinka Wararka	December 22, 2016	154	Like
Yahya Jammeh – Jamhuuriyadda Gambia (1994-Illaa Imika)
Madaxweynaha Waddanka Gambia waxa uu soo galayaa kaalinta 13aad ee madaxweynayaasha qaaradda Afrika soo maray ama imika xilka haya kuwooda ugu madax adage e ugu gacan kulul dadkoodana dhibaato weyn u gaystay ee aan ogolayn in ay xilka ku wareejiyaan si dimuquraadi ah illaa qori caaradii lagaga furfuro. Inkasta oo uu Yaxya Jammeh xilka dalkiisa hayay tan iyo 1994-kii oo dhinaca muddo xileedkiisa laga badan yahay hadana waa mid ka mid ah kalitaliyayaasha qaaradda wakhtigan xukuma kuwood ugu arxan daran ee aan ogolayn in uu xilka wareejiyo sidoo kalena awoodo badan isa siiyey.
Waxa uu xukunka dalka Gambia ku qabsaday inqilaab Milatari oo aanu dhiig ku daadan balse aad u layaab badnaa hannaankii loo soo agaasimay. Waxa uu xukunka dalkaasi Yaxya Jammeh qabsaday sabadkii 1994-kii waxaanu xilka dalkiisa hayaa muddo ku siman 21 sanadood. Inkasta oo uu doorashooyin qabtay oo dib loo soo doortay sannadihii 1996, 2001, 2006 iyo 2011 hadana waxa la sheegaa in dhammaan doorashooyinkaasi uu ku shubtay sidoo kalena aanay cid hagaagsani la tartamin maadaama xisbiyada mucaaridka ah aan loo ogolayn xorriyad ballaadhan waxaanu mar walba ku soo baxaa aqlabiyad aad u badan isaga oo isku dhiga in uu yahay nin aanay cidina la tartami karayn maadaama dadkiisu jecel yahay balse xaqiiqadu taasi way ka duwan tahay oo waa nin xukun jecel oo aan ogolayn in si xalaal ah looal tartamo. Dhawaan ayay ahayd markii uu hadana sheegay in uu mar shanaad isa soo sharrixi doono marka ay muddo xileedkiisu dhammaato. Yaxya Jimca waa Madaxweynihii dhawaan inta xilka madaxtinimo lagaga guulaystay ee hambalyeeyey haddana mar kale diiday natiijadii lagaga gulaystay doorashada.
Mudada xilka: 21 sanadood+
Xukunkiisa: Yaxya Jammeh waa rajiim aad u awood badan. Waxa uu ku tuntaa xuquuqda aadamaha. Waxa la sheegaa in uu lacago badan dhigtay baanan dibadda ah oo uu hantida dalkiisa sida uu doono ugu takri falo. Ma aha nin furfuran oo xidhiidho badan oo caalami ah leh balse waxa uu yahay nin wax badan ka qabtay dhinaca cudurka HIV/AIDS isaga oo ka mid ah dadka aaadka u neceb galmada dadka isku jinsiga ah oo uu sheegay in uu dalkiisa ka mamnuucay.
Charles Taylor – Liberia (1997-2003)
Inkasta oo Madaxweyne Charles Taylor muddo aad u yar oo Lix sanadood ah xukunka dalka Liberia gacanta ku hayay hadana waxa la sheegaa in uu yahay mid ka mid ah gacan ku dhiiglayaasha Madaxda ka soo noqday qaaradda Afrika kuwooda ugu arxan darnaa ee dadka dhibaateeyey. Charles Taylor waxa lagu naanaysaa “Aabbihii Geerida” iyada oo looga jeedo gumaadkii uu gaystay muddadii uu xilka dalkaasi hayay iyo waliba intii uu xukunka ku soo socday ee uu hogaaminayay jabhaddii xukunka dalka la wareegtay. Bishii August 1997 illaa 2003 ayuu ninkani kursiga madaxweyne ee Liberia ku fadhiistay isaga oo awood Milatari ku qabsaday. Balse muddo kadib waxa culays weyn oo adduunku saaray kadib uu xilka isaga tagay markii ay ciidamada nabad ilaalinta qaramada midoobay dalkaasi hawlgal culus ku ekeeyeen isaga oo wakhtigaasi u baxsaday waddanka Nigeria balse markii dambe gacanta lagu dhigay oo maxkamadda dambiyada dagaalka lala beegsaday.
Mudadii xilkiisa: 6 sanadood
Xukunkiisii: Charles Taylor waxa uu mudada xukunkiisa iyo intii uu kursiga u soo halgamayeyba lagu tilaamaa mid ka mid ah hogaamiyayaashii qaaradda Afrika soo maray kuwoodii ugu dilaasanaa isaga oo la sheego in uu gumaaday dad badan, in badana uu jeelasha ku jidh dilay, in badan oo u xasuuqay arrimo siyaasadeed taasoo keentay in markii dambe cadaadis xukunka lagaga tuuro.